Miara-mijoro amin’ny Mpiaro ny fahalalaham-pitenenana Maraokana ny fikambanana Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2015 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, English, Deutsch, Italiano, বাংলা, Swahili, македонски, Shqip, русский, bahasa Indonesia, English
Mitaky ny rariny hoan'ireo mpiaro ny fahalalaham-pitenenana miatrika fitsarana ao Maraoka noho izay fikatrohany izay ny fikambanana Global Voices.
Nataon'ireto mpikatroka ireto izay hiarovana ny zon'olombelona, hametrahan'ny mpitondra ny mangarahara eo anatrehan'ny vahoaka, ary ny hampanjaka ny firenena tan-dalàna ao amin'ny fireneny. Ny dimy voampanga ho “mandrahona ny filaminana anatin'ny fanjakana” ary ny roa voampanga ho “mandray fanampiana avy any ivelany tsy miteny amin'ny Sekretarià Jeneralin'ny governemanta.” Miantso ny governemanta maraokana izahay hanaja ny adidiny voasoratra ao amin'ny dina iraisampirenena momba ny zon'olombelona sy hanaisotra ny fiampangana atao amin'ireo olona fito ireto.
Hisham Almiraat nandritra ny zaikabe Global Voices tao Nairobi, 2012.
Ao anatin'ny ampangaina i Hisham Almiraat, dokotera mpitsabo sady mpikambana efa ela ato amin'ny vondrom-piarahamoninay. Tsy afaka ny hangina manoloana ny manjò ny namanay izao izahay. Nekenteny tao amin'ny tontolom-bilaogin'i Maraoka efa ho folo taona i Hisham. Anisan'ny mpiara-manorina ireo tetikasan-tsehatra fampitam-baovaon'olontsotra Talk Morocco sy Mamfakinch izy, ary nanao servisy amin'ny mahatalen'ny fisoloambava [advocacy] azy tato amin'ny Global Voices. Tamin'ny fandanjalanjana ny asa sy ny fanalan'andro ankafizina, dia nandany taona maro ho amin'ny fanatsarana ny fiainana sy ny fanasoavana ny Maraokana i Hisham, na tamin'ny maha-mpikatroka azy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena na tamin'ny mahadokotera mpitsabo azy.
Tahaka ireo vondrona media sy mpandala ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao, dia manahy izahay fa maneho ny fikasan'ny governemanta maraokana hampangina ireo mpitsikera ny politikany sy ny fomba fanaony ity raharaha ity.
Mihevitra izao toe-draharaha izao tsy ho fandrahonana mahazo ity namana sady mpiara-miasa aminay ity ihany izahay, fa amin'ny iraka sahaninay amin'ny ankapobeny. Amin'ny mahafikambanan'ny bilaogera sy ny mpikatroka avy amin'ny firenena maherin'ny 160 anay, dia ambaranay isan'andro ny zon'ny olombelona rehetra ambanin'ny masoandro, tahaka ny ilazanay ny tantara avy amin'ny vondrom-piarahamonina manerana izao tontolo izao tsy misy mampita.
Miantso ireo mpiaradia izahay hanohana ny hafatray, sy ny governemanta vahiny hanohina ny governemanta maraokana hanazava ny ataony sy ny fitsipika arahiny. #Justice4Morocco
TOHANO NY ANTSONAY
Soniavo ity fanambaran'ny fikambananay ity [TSINDRIO RAHA HANASONIA]
Tohano ny fanentanana ao amin'ny tambajotra sosialy [TS] amin'ny fampiasana ny diezy #Justice4Morocco
Vakio sy aelezo ny tantara momba ny raharaha:
Maraoka: Miatrika Fitsaràna i Hisham Almiraat Mpikamban'ny Global Voices , Global Voices teny malagasy
Vakio sy zarao ny nosoratan'i Hisham taloha hoan'ny Global Voices